Tirakoobka ciidamada Soomaaliya muxuu u noqday dhaan dabangaalle? - BBC News Somali
Tirakoobka ciidamada Soomaaliya muxuu u noqday dhaan dabangaalle?
Image caption Ciidanka xooga dalka
Inkastoo arrimaha milteriga Soomaaliya ay ku gedaaman yihiin arrimo ay adag tahay in si waafi ah loo fahmo, ayaa hadana waxaa arrinta xiiso u sii yeelay isku dayada ah in la diiwaan geliyo ciidammada ee waqtiga badan qaatay, siyaasad bandanna soo dhex-gashay.
Maanta ayaa Soomaaliya looga dabaal degayaa 59 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Munaasabada oo ku beegnayd 12-ka bisha April ayaa loo soo horumariyay maanta oo khamiis ah, madaama maalinta berito ah ay tahay malain Jimco ah.
Arrinta ugu badan ee dad badan laga yaabo inay maankooda ku soo dhacdo ayaa ah buuq muddooyinkii dambe ka tagnaa milateriga Soomaaliya oo ay kamid tahay mushaar la'aan ay ka cabanayeen qaar ka mid ah askarta ee ku sugan furimaha dagaalka.
Mas'uuliyiinta Dowladda Soomaaliya waxay muddooyinkii dambe si yaabo kala duwan uga hadleen arrimaha tirinta ciidaanka.
Image caption Afar jeer ayaa la badelay hogaanka ciidanka milateriga Soomaaliya
Ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya, Xassan Cali Kheyre ayaa horay u sheegay in markii uu yimid xafiiska looga digay tirinta ciidamada.
"Shirka golaha wasiirada markii ugu horesay oo aan fariistay ayaa wasiir Khadiija waxay igu tiri, 'ras'isuul wasaare waan kula talinayaa arrimaha tirinta ciidanka iska dhaaf, haddii aad tirisaan ciidaanka, waxay lamid tahay adinkoo Niyukleyrkii Ciraaq lagu qarxiyay soo helay". Sidaasi waxaa horay u yiri Ra'iisul wasaare Xassan Cali Kheyre.
Waxaa kale oo ra'iisul wasaaraha uu sheegay in taasi aysan ka dhigneyn in aan ciidamada la tirin karin, balse oraahdaas ay salka ku heyso musuqmaasuq baahsan oo ka jira ciidanka iyo kuwwii tiran lahaa oo ay madaxda kamid yihiin ay hortaagan yihiin, iyagoo ka eegaya dan shaksi iyo mid qabiil.
Hadalkii ra'iiul wasaaraha ee ahaa in looga digay tirakoobka ciidamada ayaa sidookale waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa dalka Kenya, halkaas oo ay ka jirto xaalad noocaas ah. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in markii ay diwaan gelin kale ku sameyeen booliska ay heleen shan kun oo askari oo dowladda mushaar ka qaata bil walba, balse aan la garaneynin halka ay ku sugan yihiin iyo shaqada ay hayaan.
Image caption Ciidanka dowladda Soomaaliya
"Caqabadda heysata in la tirakoobo ciidaanka dowladda ayaa waxay tahay in musuqmaasuq baahsan uu ka dhex jiro hogaanka ciidanka iyo in mar walba oo isbadel lagu sameeyo taliska ciidaanka uu mid walba la yimaado qorshe hor leh," ayuu yiri Xildhibaan Axmad Macallim Fiqi oo katirsan guddiga difaaca ee barlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Fiqi ayaa intaas raaciyay in dib u heshisiin dhab ah loo baahan yahay, taasi na ay gacan ka geysan karto ciidan nidaamsan.
Ciidamada milateriga ee Soomaaliya oo dadka ka faallooda arrimaha milateriga ay shegeen in midowgii Soviet-ka uu dhisay aya aad u kala daatay kadib dagaalkii 1977-kii ee Soomaaliya ay la gashay Itoobiya, waxaase jirtay in dowladihii dambe ay isku dayayeen in la dhiso ciidan qaran oo Soomaaliyeed.
"Caqabadda koowaad waxay tahay in ciidaankii hore uu burburay, tan kale waxay tahay in dadkii aanan la isku keenin, haddii la doonayo ciidan nidaamsan waa in marka hore laga shaqeeyo siyaasadihii lagu dhisi lahaa ciidanka Qaranka oo golaha wasiirada iyo barlamaanka ay la yimadaan siyaasad loo dhan yahay". Waxaa sidaasi BBC-da u shegay Xassan Cali oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Xasan ayaa sidoo kale sheegay in ciidaanka uu kala daatay sannadihii sideetameeyadii ilaa sagaashameeyadi, oo cuduradii xiligaasi jiray ay wali taagan yihiin.
Ciidaanka dowladda Soomaaliya ayaa hadda tiradooda lagu qiyaasaa 16 kun oo askari, kuwas oo dowladdu ay sheegtay in markii hore musharkoodu ay bixin jireen dalalka Mareykanka, Imaraadka iyo Turkiga, balse hada ay sheegtay inay la wareegtay.
Tirakoobka saxda ee ciidaanka dowladda oo aan la ogeyn iyo tallaabooyinka ciidamada qaar ay uga soo baxayaan goobaha dagaalka mushaar la'aan awgeed ayaa walaac horleh ku keeni karta qorshaha dowladda ee ah inay amniga kala wareegto ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, oo qorshuhu yahay inay Soomaaliya ka baxaan sanadaha soo socda.